မရတာကို လိုချင်နေကြသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » မရတာကို လိုချင်နေကြသူများ
Posted by thihayarzar on May 24, 2012 in Ideas & Plans | 18 comments
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှိသူများသည် အလိုလောဘ အလွန်ကြီးကြသည် … အကုန်လုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါ … ရတာလေး ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် အောင် မနေထိုင်ကြဘူး … ဗုဒ်ဓရဲ့တရားတော်ကို မလိုက်နာရာ ဆန့်ကျင်ရာလည်း ကျတယ် ….. သူများမကောင်းတာကိုပဲ မြင်ပြီး မိမိ မကောင်းတာကိုကျတော့ မမြင်တက်တဲ့ တစ်ဖက်ကန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် …. မန်းလေး ရန်ကုန်မှာ မီးမလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ ဆန္ဒပြတယ် တစ်ခြားမြို့တွေတော့ မသိပါဘူး …. အားလုံးကိုတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ … တစ်နိုင်ငံလုံးကို အလင်းရောင်တွေပေးချင်တာပါပဲ ….. မဖြစ်နိုင်လို့ မပေးနိုင်လို့ မရှိလို့ မရလို့ မီးမလင်းတာကို ဆန္ဒပြကြတယ် … တော်တော်လည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့သူတွေ ထမင်းစားပြီး ဗုဒ်ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ အသိတရားမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြတယ် …. ဒီမိုကရေစီကျလိုချင်တယ် မီးကျ၂၄နာရီလိုချင်တယ် လောဘတွေကတော့ ထိပ်ရောက်နေကြတယ် … မိမိကိုယ်ကိုတော့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုတယ် ဘာတွေပြင်ရမယ်ဆိုတာကို မစဉ်းစားကြဘူး … မပြုပြင်ကြဘူး ….အရင်ဆိုရင်တော့ အဖမ်းခံရပြီ … အခုလည်း လျှပ်စစ်မီး ဌာနကလူတွေ ပြည်သူတွေနဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ် ရှင်းပြတယ် အရင်ကရှိခဲ့လား … အကောင်းဘက်ကိုပဲဦးတည်နေတာပါ … အားလုံးနားလည်ကြစေလိုပါတယ် … ရွှေလီ-မန်စံ ဓာက်အားလိုက်းတွေ ဗုံးခွဲခံရတယ် …. ရဲရွှာမှာ ရေအားနည်းနေတယ် … အဓိကတွေကိုတော့မေ့နေတယ် … တကယ်ဆို သောင်းကျန်သူတွေ ဗုံးခွဲတဲ့သူတွေကို ဆန္ဒသွားပြရမှာ …
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲ …. နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ မြန်မာပြည်ကောင်းစားအောင် ပြည်သူတွေ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေတာကို ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူတိုင်းက သိကြပါတယ် … တစ်ချို့က အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းနေကြတာပါ …. ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ ငါတို့ဘာတွေပြင်ရမယ် ဘာတွေလိုက်နာရမယ် ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သုံးသပ်ကြပါ …. ကောင်းအောင်မပြင်ကြပဲ မကောင်းတာအရင်လုပ်တယ်… အရင်ကတော့ မလှုပ်ရဲကြဘူး …. သူများနောက်ကလိုက်တော့ နောက်လိုက်ပဲ ဖြစ်တော့မပေါ့ … သူများနိုင်ငံလို သတ္တိရှိရင် မိမိကိုယ်ကို မီးရှို.ပြီး ဆန္ဒပြကြပါလား … ဒါဆိုတော်တော်နာမည်ကြီးသွားမှာ ပြည်သူတွေလည်းအကုန်ပါလာမှာ သမ္မတကြီးလည်း နေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး …နိုင်ငံတကာကပါ စိတ်ဝင်စားကြပါသေချာတယ် … ပြောချင်တာက အားလုံးကောင်းအောင်နေကြဖို့ပါ …. ဒီမိုကရေစီ ပြည်သူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပါ …
ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်ပါ ….. လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းလည်း မဟုတ်ပါ … ၀န်ထမ်းမိသားစုကလည်း မဟုတ်ပါ ….မြင်သမျှ လေးတွေကို စိတ်တိုင်းမကျသောကြောင့် ဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်သည် … မှားတာလေးတွေရှိရင် ခွင့်လွှက်ပေးကြပါ …
Let me ask first that Is it full or enough? that is why you learned about Myanmar Political, Electric Power Projects & Ministers.
အလိုလောဘနည်းလို့ ၊ မရနိုင်မှန်းသိလို့ လျှပ်စစ်မီးအလုံလောက်မရတာကို သီးခံလာတာ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ။ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကား ကြောင့်ပိုလျှံနေတာကိုတောင်းတာ ။ ပြည်သူကိုမကြည့် ပဲ လောဘတက်ပြီး ရောင်းစားနေကြတာတွေကို ဒေါသဖြစ်လို့ တောင်းဆိုနေကြတာ ။ မရနိုင်တာကိုတောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူး ။ရသင့်တာ ရနိုင်တာတွေကိုတောင်းဆိုနေကြတာ ။နိုင်ငံတကာက သိဖို့ထက် ကိုယ့်နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေသိဖို့ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ။ ခေါင်ကမလုံလို့မိုးယိုတာ ။ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓါတ်တွေ အရင်ပြင်ကြလေ ။
“အလိုလောဘ အလွန်ကြီးကြသည် … အကုန်လုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါ … ရတာလေး ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် အောင် မနေထိုင်ကြဘူး … ဗုဒ်ဓရဲ့တရားတော်ကို မလိုက်နာရာ ဆန့်ကျင်ရာလည်း ကျတယ် …”
ကျွန်တော်နားမလည်လို့ ပါ လိုရာ ဆွဲပြောတယ်လို ထင်ပါတယ်ဗျာ
ပြည်သူတွေ ကပဲ ဗုဒ်ဓရဲ့တရားတော် ကိုလိုက်နာရမှာလားဗျာ
အုပ်ချုပ်တဲ့ သူတွေ က ကော ဗုဒ်ဓရဲ့တရားတော် နဲ့ အညီ ပြည်သူတွေ ကို အုပ်ချုပ်၇ဲ့ လား မေးချင်ပါတယ်
ကျွန်တော် တို့ က ကျောက်ခေတ်မှာနေ နေတာမှ မဟုတ်တာဗျာ လူတိုင်းလူတိုင်း စားဝတ်နေရေးပြည်လည်
ပြီး လက်ရှိပစ်စုတ်ပန် ကာလ နဲ့အနာဂတ်မှာ အာမခံချက် ၇ှိဖို့စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ့်ကျန်းမာ၇ှိဖို က အုပ်ချုပ်တဲ့ လူတွေရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပေဘူးလားဗျာ . မီးမရှိတာလဲ ခုနှစ်နွေရာသီမှ မဟုတ်တာဗျာ အစိုးရ က ဒီပြသာနာ ကို ပြေရှင်းဖို့တာဝန်ယူသင့်တာ က ၁၉၈၈ ကစသင့်တာပါပဲ ဘာလို့ လဲဆိုတော့သူတို့က အစိုး၇လုပ်ချင်တာကို ..အစိုး၇ က အစိုးရတာဝန် ကိုယူ ဖို့သိသင့်ပါတယ်ဗျာ..မဟုတ်ရင်တော့ အခွင့်အရေးပေးလာ၇င် တော့တာဝန်ယူမှုပျက်ကွက်နေတဲ့ အုပ်ချုပ်သူကို ပြည်သူတွေ ကပြန်ပြီးထောက်ပြနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတော့ ရှိရမှာပေါ့..ပွဲစားသာသာ အစိုးရ ( ရှိတာထုတ်ရောင်း ခုတ်ရောင်း ပါမစ်တွေ မျိုးစုံးဖန်တီး ပြီး ထုတ်ရောင်း) လုပ်ပြည်သူ့ အတွက် ဘာမှမလုပ်ပဲအမြတ်ကြီးစား ငါဖို့ ပဲလုပ်ပြီး မီးပိုပေးဖို့ မီးမှန်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့ဖယောင်းတိုင် ကိုင်ကာမှ ရတာလေး ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် အောင် မနေထိုင်ကြဘူး လို့ပြည်သူကို ပြောချင်တာကတော့မမိုက်ပါဘူး ကိုယ့် မလုပ်နိုင်ရင် လဲ မသိသလို မနေပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေ ကို အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါဗျာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေတော့ ဘယ်သူမျက်နှာမှ မထောက်ဘဲလုပ်နေပြီး တော့ကိုယ့် ခံရမယ့် အလည့် ကျမှဲ့ဗုဒ်ဓရဲ့တရားတော်ကို မလိုက်နာရာ ဆန့်ကျင်ရာလည်းကျတယ် လို့ ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ လဲ ဗုဒ်ဓ လမ်းစင်အတိုင်း ၇ှိသမျှစည်းစိမ်းတွေ စွန့် ပြီး တောထွက်ကျပါတော့အဲယောင်လို့တရုတ်ပြည် ရုရှားပြည်မှာ သွားနေကျ ..ချောက်ထဲ ကျမှာလဲမပူပါနဲ့အမေစု ကယ်လိမ့် မယ် .. မေ့လို့ဇော်မင်းကြီးပါခေါ်သွားဗျာ မန်းလေး က ဟို လျှပ်စစ် က မိန်းမကြီးပါမမေ့နဲ့ 
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ မြန်မာပြည်ကောင်းစားအောင် ပြည်သူတွေ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေတာကို ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူတိုင်းက သိကြပါတယ်..
ခု မှ လုပ်မလို့ရှိသေးတာပါ …. မလုပ်ခဲ့ရသေးပါဘူး …
အရင်တည်းက တကယ်လုပ်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ခုလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးတွေ ဖြစ်မလာပါဘူး …
မြန်မာနိုင်ငံ ကြွေးတင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာသူလဲပါတယ်။
အခုတော့ အကြွေးတွေကို သနားစရာနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ ဟိုနိုင်ငံကလျှော်ပေးလိုက် ဒီနိုင်ငံကိုဖားလိုက်။
ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာဒို့မမှုပါဆို အခုတော့
၀န်ကြီးဇော်မင်းဘာလို့ ထွက်မလာသေးတာလဲ..။ လူသိရှင်ကြားပြည်သူတွေကိုစော်ကားထားတဲ့
၀န်ကြီး လိပ်လိုခေါင်းတောင်မပြူသေးဘူး။ ရှက်စရာကောင်းတယ် အရင်ကပိုလျှံနေတဲ့လျှပ်စစ်တွေ
ရောင်းစားနေရတဲ့သူကြီး ထွက်မရှင်းသေးဘူး။ အခုမှဟိုလူကယ်ပါဒီလူကယ်ပါ သူများနိုင်ငံကိုအားကိုးနေ
တယ်..။ အရင်ကတည်းကမီးကပျက်နေတာ အခုမှမဟုတ်ဘူး။
အော်ပြောရဲလိုက်တာ။ မရတာကို လိုချင်နေတယ်ဆိုပါလား။ တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ပါရစေ။ ခင်ဗျားအိမ်မီးလာတာ ကြိုက်လား မလာတာကြိုက်လား။ ကျွန်တော်ကတော့ ၂၄ hours လာနေတာကိုပဲ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာထဲက ပြတ်လာခဲ့တာ ခုထိပြတ်တုန်း ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိခဲ့ဘူး ဒါဘယ်သူ့တာဝန်လဲ။ ရှိတာတွေကိုရောင်းစားတယ်။ နောက် စောက်ရူးဝန်ကြီးက ၁၅၀၀ မက်ဂါဝပ် တောင် ကုန်အောင်မသုံးနိုင်ဘူး ဒါကြောင့်ပိုလို့ ရောင်းတယ်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကိုကောခင်ဗျားသိပါသလား။ လိုချင်ရင်တော့တောင်းမှ ရတယ်ဗျ ဒါကြောင့် တောင်းဆိုရမယ်။ ဒါကိုပဲ ခင်ဗျားက အသိတရားမရှိဘူး ထမင်းစားတာတွေကော ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကော စုံနေတာပဲ လျောက်ပြောနေတယ်။ ဘယ်သူမှ ရဟန်ဒါ မဟုတ်ကြဘူး။ လောဘတော့ အနည်းနဲ့အများရှိကြတာပဲ။
ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆန္ဒပြတယ်၊ မီးရှို.ပြတယ်ဆိုတာက ရွေးချယ်ချက်ပါ။ (မီးပြတ်တာကို စိတ်တိုင်းမကျလို့ ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်) :-)
ရယ်ရလွန်းလို့ .. မျက်ရည်ရော ၊ နှပ်တွေပါ ထွက်မိပါရဲ့ သီဟရာဇာ ဆိုသူရယ် … ။
တော်တော်လည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့သူတွေ ထမင်းစားပြီး ဗုဒ်ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ အသိတရားမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြတယ် ဆိုတာကတော့ ရှင့်ပထွေးတွေကိုပဲ သွားပြောလိုက်ပါ … ။ ကျွန်မတို့ မျှော်လင့်တဲ့ မီးလေးတစ်ပွင့်လင်းဖို့ ဆိုတဲ့ စိတ်ဇောကိုတောင် ဒီလောက်ခိုင်းနှိုင်းပြနေလျှင် ရှင့်ပထွေးတွေ ၊ ခုိးစား ၀ှက်စား မျှစားကြတဲ့ စိတ်တွေကိုရော ဘယ်လိုပြောမလဲ ။ ပိုလျှံနေလို့ပါ ပြောဦးမလား … တကယ်ရယ်စရာကောင်းတယ် ။
အရင်ဆိုရင်တော့ အဖမ်းခံရပြီ … အခုလည်း လျှပ်စစ်မီး ဌာနကလူတွေ ပြည်သူတွေနဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ် ရှင်းပြတယ် အရင်ကရှိခဲ့လား … အကောင်းဘက်ကိုပဲဦးတည်နေတာပါ … အားလုံးနားလည်ကြစေလိုပါတယ် … ရွှေလီ-မန်စံ ဓာက်အားလိုက်းတွေ ဗုံးခွဲခံရတယ် …. ရဲရွှာမှာ ရေအားနည်းနေတယ် … အဓိကတွေကိုတော့မေ့နေတယ် အရင်ကတော့ .. မီဒီယာတွေ ဒီလောက်မှ မကျယ်ပြန့်သေးပဲ … ဖိနှိပ်ချင်တိုင်းဖိနှိပ် ဗိုလ်ကျချင်တိုင်းဗိုလ်ကျပေမယ့် … ပြည်သူတွေ မသိခဲ့ရဘူး … ။ အခုတော့ ကမ္ဘာဟာ ရွာကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ …. အင်တာနက်ထဲကနေတဆင့် လူတွေ ၊ သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ ချည်ပြီ တစ်မိနစ်တွင်းသိအောင်လုပ်လို့ ရနေပြီ … ။ အခုလည်း လျှပ်စစ်ကလူတွေ ပြောချင်လို့ တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ်များ ထင်သလား ဟယ် … ။ သူတို့ တောက်ကြောတင်းပြီး ဘ၀င်မြင့်စကားမပြောလျှင် လူသိမှာစိုးလို့ … မျက်နှာပန်းလှအောင် ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်ပြနေတာ … ။ လူကြားကောင်းအောင်လုပ်နေတာ … ။
အဓိကကို မေ့တာက မင်းကွ … ၊ ရေအားနည်းတယ် ဗုံးခွဲတယ်လို့ ပြောတိုင်း … စုံလုံးမှိတ်ယုံပစ်လိုက်ဖို့ .. မအကြသေးပါဘူး ။ ပိုလျံတယ်လို့ ကြွေးကျော်ပြီး ရောင်းစားနေတာတွေ … ဘယ်မှာ သွားထားလဲ … ။
မင်းတို့တွေ သိပ်ခက်တာပဲ … မင်းတို့ ကျောင်းက ရိုက်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ ၊ မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့ အကျင့်တွေ .. သံမှိုစွဲလာတယ် … ။ အကျိုးကျောင်းတောင် ဆီလျှော်အောင် မတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက်တွေ … နောင်လူလုပ်ဖို့ ခက်လိမ့်မယ် … ။ ပြောရလျှင် မင်းတို့လည်း အခွင့်ရေးသမားပါပဲကွာ .. ။ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာသုံးပြီး ရုရှားသွား ၊ ပညာသင် … တောက်တလွဲစာတွေရေး …. အခွင့်ထူးခံဖို့ပဲချောင်းနေတယ် … ပြောရလျှင် အကုသိုလ်တက်တယ်ကွ ။ :mad:
အိတုံ ပြောတာ မြန်မာမိန်းကလေးမဆန်ပါဘူး … မိန်းကလေးပြောရမယ့်စကား တွေမဟုတ်ပါဘူး … ကျွန်တော် ဝေဖန်တာကို ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး .. ကျွန်တော်ဖထွေးဆိုတော့ ခင်ဗျား အမေနဲ့ ပေးအိပ်လိုက်မယ် .. ကြိုက်လား …
ခင်ဗျားတို့က ဦးသန်းရွှေနဲ့ပဲတန်တယ် … အရင်က ဦးသိန်းစိန် လည်း ဘာလုပ်ရဲမှာမို့လဲ … တည့်တည့်တွေးကြည့်ပါ … အရင်ဟာအရင် နောက်ဟာနောက်ပဲပေါ့ … ဦးသိန်းစိန် အမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး … ကိုယ့် ဆန်ကိုစားနေတာ အခုမှ ဖင်တွေ ယားနေကြတာ ကြည့်မရလို့
အွန် … အံ့သြစရာပါပဲ …. မြန်မာမိန်းကလေးဆန်အောင်ပဲ ပြောရမတဲ့လား ။ သေလိုက်လေ … ။ ဘယ်လိုပြောလျှင် မိန်းမဆန်တာတဲ့လ.ဲ.. ရေလိုက်ငါးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ မှန်လိုက်တာ … သမ္မတကြီး ကျန်းမာပါစေ ၊ အဆီနှစ်တွေ များများ ထုတ်စားနိုင်ပါစေ၊ တိုင်းပြည်ကရသမျှ ချူစားနိုင်ပါစေလို့ ပြောရမလား ဟဲ့… ။
နင်ကသာ မတရားခံရတဲ့ ပြည်သူတွေဘက်ကမနာပဲ … ကြားထဲက ငထွားခါးနာနေလို့ပြောနေရတာ … ။ မတရားတာရေးလျှင် .. မတရားသလို အပြောခံရမှာပဲ … ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မီးမလာလဲ ငုတ်တုတ်နေနိုင်တယ်ဆို .. ထိုင်နေ … ။ မီးသာမလာလျှင် နင်အခုကြည့်နေတဲ့ ပို့စ်တောင် ရေးလို့မရဘူး ။ လူတကာကို လိုက်ပြီး ပုတ်ခတ်စော်ကားမနေနဲ့ … ။ ငါ့အမေက သတ်သတ်မှတ်မှတ်လင်ကြီးငုတ်တုတ်ရှိတယ် … ။ တွေ့သမျှလူ အဖေတော်ချင်မျက်နှာလုပ် ရေးပြနေတဲ့ နင်လိုလူမျိုးအတွက်သာ နင့်အမေက ဓါးစာခံဖြစ်ရတာပဲ … ။သူများတွေကိုပြောချင်လျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော … ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံမှာနေပြီး .. အသိတရားရှိရဲ့လားဆိုတာ ပြန်စဉ်းစား ။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတယ်ဆိုပြီး .. သိမ်းကျုံးလာစော်ကားမနေနဲ့ ….. ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေဟာ မစ္ဆရိယစိတ်အင်မတန်ကြီး
မှာတင် တိုးတတ်သွားကြပီ။မနေ.တစ်နေ.က မှ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာလားဘာလားရတယ်
စင်္ကာပူလောက်ကိုဖြစ်ချင်နေကြဘီ။ပြောနေတဲ့တော်ကီတွေက ဒီလောက် နှစ် ၄ ၅၀လောက်
စုတ်ပြတ်သတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဘယ်လို လုပ်ချက်ချင်းဖြစ်မှာလဲ။ခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်လို.မှမရတာ
လူတွေ လူတွေ ကိုယ့်ဆိုဒ်ပဲကိုယ်ကြည့်နေကြတာကိုး။ခင်ဗျားတို.အားတိုင်းယားတိုင်းဆဲဆဲနေ
နယ်ရုံးတွေတော့မသိဖူး။ညတောင်နှစ်ရက် သုံးရက်ဆက်ပီးမအိပ်ဘဲအလုပ် လုပ်နေရတယ်လို.
ပြောရင်ယုံကြမှာလဲမဟုတ်ဖူး။တန်ရာ တန်ရာအစိုးရ ရတာပဲကောင်းပါတယ်. နည်းနည်းလေး
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရေ … ကျွန်တော် တော့ ဒီလို လေးတွေးတယ်ဗျာ။
ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေ ဒီလို ရှိတယ်ဗျ။
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ link -> ..http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13743:2012-05-23-04-27-12&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112
အဲလို ရှိပေမယ့်လဲ … ဘယ်စီမံကိန်းက ဘယ်လောက်ထွက်တယ် ဘယ်လောက် သူများကို ဘယ်နှစ်နှစ် ပေးရတယ် .စသဖြင့် … ပြည်သူပြည်သားတွေ ဘာမှ မသိရဘူးဗျ … မြစ်စုံ စီမံကိန်းကိုကြည့်ပါလား .. စီမံကိန်း စပြီး ၂ နှစ်ကျော် တော့မှ ပြည်သူပြည်သားတွေ သိရတာရယ်။ အဲ့ဒီတော့ .. ပြည်သူပြည်သား တွေမှာလဲ … နှစ် 20 ကျော်ကြာ အနာဟောင်းက တစိုစို ဖြစ်နေတာဆိုတော့ … ယင် နားရုံ နဲ့ နာကြပြီကိုး …(ဖင်ယားတယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအတွက် တော့ ရှုံ့ ချပါကြောင်း)……
အခု ဖယောင်းတိုင် ထွန်း ကြတဲ့အတွက် .. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွေလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ SKY NET (Up To Date Channel) မှာတောင် မိုးနတ်မင်းကို ဆုတောင်းပါဆိုတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ အင်တာဗျူးတာ ပြသွားသေး …။
ကျွန်တော့ တစ်ယောက် ထည်းရဲ့အမြင်အရ တော့ ….. ၀န်ကြီးဋ္ဌာန အရာရှိကြီး များကနေ အောက်လက်ငယ်သား ၀န်ထမ်း တွေအထိ … ဖိအား ရသွားတဲ့အတွက် . ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ၃ ရက် ဆို ၃ရက် .. ၅ ရက်ဆို ၅ ရက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်သင့်ကြောင်း နဲ့ … တခြားအကြောင်းအရာ တွေ မရောထွေးစေ လိုကြောင်း …. ဆန္ဒပြ တာကို Fashion တစ်ခု လိုမလုပ်စေချင်ပါကြောင်း ရယ်ပါ။
ပြောကြပါ။ပြောကြပါ။ ပြောစရာရှိပါလျှက်နဲ့ မပြောဘဲငုံ့ခံနေတာဟာ သီးခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ကြောက်လို့ လုပ်သင့်တာ မလုပ်တဲ့ ဘယာဂတိ..မကောင်းမှုတစ်ခုပဲ။
အဲ…ဒါပေမယ့်…လူက ပြောကြပါ။ ဒေါသကပြောတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ အာဃာတက ပြောတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ လူ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောကြပါ။ လူ့စိတ်မှာ ဒေါသပူး…မောဟပူး..မာနပူး..လို့ အဲဒီကောင်တွေက ပြော တာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဘုရားလဲ စကားပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောဘ ဒေါသ မောဟဆိုတဲ့ ကိလေသာနဲ့မပြောပါဘူး။ ကျုပ်တို့လဲ ပြောစရာရှိတာ ပြောကြပါ။ မပြောပဲ မနေကြပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒေါသနဲ့ မပြောကြပါနဲ့။ မာနနဲ့ မပြောကြပါနဲ့။ ဒေါသတို့ မာန တို့ ဆိုတာ လူမဟုတ်ပါဘူး။ လူမှာလာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေး ကိလေသာပါ။ ဒေါသတို့ မာန တို့ဆိုတာ ယောကျာ်းလဲမဟုတ်ဘူး။ မိန်းမလဲ မဟုတ်ဘူး။ ငါလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူဟာ ကိလေသာပါ။ မြင်အောင်ကြည့်ကြပါ။ လူကတော့ လူပါပဲ။ ဟီးဟီး
မရတာကို လိုချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကြည့်ပါ။လျှပ်စစ်မီတာ တစ်ယူနစ်ကို(၄၈၀)ကျပ်ပေးပြီး
သုံးနေတဲ့ ပြည်နယ်ပါ။နှယ်နှယ်ရရတော့ မဟုတ်ပါ။ပြောလိုတာက ကျနော်တို့ ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ ရွှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်း
ကနေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေကို မီးအမှောင်ကျနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရော မြန်မာပြည် ပြည်မထဲကိုပါ ဖြတ်သယ်သွား
သူတို့ စာချုပ်နဲ့ အပြီးရောင်းထားသလေး ဘာလေး ညာလေးနဲ့ကိုယ့်တိုင်းပြည်အဖြစ်ကို စေ့စေ့မတွေးဘဲ ရှေ့ သွားလေသူ
သူတောင်းစား စစ်ခွေးတသိုက်ရဲ.့ ဥာဏ်နည်းပုံတွေးရင်း ဒင်းတို့ အစားရှက်ပါရဲ.့ ။
အမှန်တော့ နမ့်ဆမ်က တာဝါတိုင် ဗုံးခွဲတာထက်. ရွှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်းတောင် ခွဲပြစ်လိုက်ချင်သေး။
~~~ စိတ်တိုင်းမကျသောကြောင့် ဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်သည် ~~~
အရမ်းကို တစ်ဖက်စွန်း ရောက်တဲ့ ဝေဖန်ရေးဖြစ်နေတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
မီးလိုချင်တာ အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
” ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှိသူများသည် အလိုလောဘ အလွန်ကြီးကြသည် ”
ဆိုတာကို ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ ကိုယ့်ဟာလုပ်ပြီး သုံးနေကြသူတွေ ကို သွားပြောပါ။
အခြေခံအကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ ရေ မီး ဆက်သွယ်ရေး(ဖုန်း အင်တာနက်) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဲ့ဒါလေးတွေအဆင်ပြေသွားရင်တော့ အတော်လေးကောင်းသွားမှာပါ ဆဒ္ဒပြတဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်ဆိုလို့မရပါဘူး ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ဆဒ္ဒတွေ မကြေနပ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသတာပါ။ မီးမလာတဲ့ဒုက္ခကို မီးအမြဲလာနေတဲ့သူတွေကတော့ နားလည်စာနာပေးဖို့ရာခက်ပါတယ် မီးမလာတဲ့အရပ်မှာသွား သွားနေကြည့်ရင်သသာပါလိမ့်မယ်။ မီးလာဖို့ မိုးရွာအောင်ဆုတောင်းဆိုတာကတော့ လူရွင်တော်တွေပျက်တဲ့ပျက်လုံးလိုပါပဲရယ်ရပါတယ်။ နောင်နှစ်တော့ မီး၂၄နာရီလာဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မရတာကို လိုချင်နေကြတာမဟုတ်ဘူး လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုနေကြတာဟေ့။ ရှင်းပြီလား။ ပိုနေတယ်ပြောပြီး မရတော့ တောင်းတာပေါ့။ အစိုးရကိုယ်တိုင် ကိုက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်သင့်တာ။
မဖြစ်မနေ ဒီမိုကရေစီကို သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့ အသံကို သေချာနားထောင်စမ်းပါ
သမဒဆိုတဲ့ ကိုပြောင်ကြီး ရယ်